Noocyada baseball-ka | Abuurista khadka tooska ah
ka Noocyada baseball-ka noocyadu waa nooc ka mid ah qaabab qoraal oo u imanaya inuu buuxiyo kuwa daqiiqadaha nostalgic ka sano kale. Gaar ahaan kuwaas taageerayaasha baseball-ka Mareykanka iyo isboortiga, oo waliba ku jiri kara rugby-ga Mareykanka.
Waa nooc ka mid ah far badan oo Mareykan ah iyo in ay u isticmaasho nooc qoraal ah oo naxdin leh qeybaheeda noocyada qaar taasna sidoo kale waxaa lagu gartaa, kuwa kale, xariiqyadaas toosan oo leh 90 geesood oo darajo ah. Waxaan kuusoo bandhigi doonaa taxane noocyo ama noocyo xarfaha nooca Baseball ah oo aad u adeegsaneyso dhammaan noocyada naqshadeynta, sumadda ama webska.
1 Maxay yihiin noocyada baseball-ka?
2 Fonts Baseball ugu Fiican ee Soo Degsado
2.2 Kubbadda cagta
2.5 Bosox dib loo eegay
2.7 Safka Safka
2.9 Ruuxa Team
2.10 Cherry iyo dhunkasho
3 Qeybta Vintage College
3.1 Fagaaraha Hokjesgeest ayaa cirka isku shareeray
3.3 Kooxda Jersey 97
3.4 Guridda ugu Fiican N8
3.5 NCAA Purdue Kuleyliyaha sameeya
3.6 Kubadaha Ciyaaraha
3.7 Kooxda Jersey 95
3.10 Farta Baseball Macromedia
Maxay yihiin noocyada baseball-ka?
Sida magaca ka muuqata, noocyada baseball waa ku saleysan isboortiga Mareykanka ee dharbaaxada iyo kubbadaas oo ku timaada xawaare sare in la garaaco. Isboorti Mareykan ah oo sawir-gacmeedkan lala xiriirinayo midabbo dhalaalaya iyo xaglo furan si dhakhso leh loogu soo jiito dareenka akhristaha ama daawadaha.
Qof Mareykan ah, xaqiiqda kaliya ee ah inuu arko baseball ama nooca baseball wuxuu u horseedi karaa kuwa galabnimada Axadda cunaya eeyahooda kulul oo arka xiddigta baseball ee soo socota. ka muuqato baakadaha badarka aad ugu jeceshahay. Waa nooc qaab qoraal ah oo awood u leh soo jiidashada dadka nostalgic, marka garashada sida loogu isticmaalo si sax ah, maadaama ay u baahan tahay hawo retro meel kasta oo aan u adeegsan doonno, waxay soo jiidan kartaa hogaamin badan.
Taasi waa, haddii aan dooneyno inaan ku madadaalino degel internet ama xirmo kasta guriddaas iyo dib u noqoshada, Xarfaha baseball-ku waa hagaagsan yihiin si loo hubiyo inaan saameyn ku filan ku yeelan karno maskaxda kuwa arka xayeysiintayada, baloogyada ama e-commerce.
Nooc muuqaal ah oo astaan ​​u ah iyo in ka badan oo la xiriira Mareykanka, sidaa darteed baayacmushtarigaas oo dhan ee la xiriira waddanka Waqooyiga Ameerika Waxaad isticmaali kartaa ilahaan oo aan cidna uga hari doonin cidna. Waxaan ku tusi doonaa sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo baseball ama noocyada baseball si aad u qabato oo aad ugu isticmaasho shaqooyinkaaga kala duwan.
Fonts Baseball ugu Fiican ee Soo Degsado
Aynu ku sameyno xarfahaan mareykanka iyo sidaa caan ah inay ku siiyaan noocyo badan oo iyaga ka mid ah oo leh sababo kala duwan. Laga soo bilaabo tan ugu caansan ee kuwa maaliyadaha Mareykanka u eg oo leh noocyo waaweyn oo ballaaran oo loogu talagalay ardayda kuleejka illaa kuwa dib u soo noqnoqda oo kugu dhiirrigelin doona sababo kale. Waxaan isku daynay inaanan seegin wax aan lagama maarmaan u ah liiska xarfaha baseball. Halkan ayaan tagnaa.
Font-kan waxaa loogu talagalay shaqsi ahaantiisa, laakiin maahan mid ganacsi. Waa far aad u Mareykan ah oo leh qaab wicitaan muuqaal leh oo si deg deg ah dareenka ula soo baxa finalka "l" iyo tuubadiisa taasi waxay mareysaa inta hartay erayga tusaale ahaan loo bixiyay.
Si aad u soo dejiso - Brannboll Fet font
Font-kan waxaad isticmaali kartaa wax badan ganacsi iyo adeegsi shaqsiyeed, markaa waad xor tahay PlayBall waa xarfaha unicode ee bixiya taageerada luqadaha kala duwan ee adeegsada Latinka iyo noocyadeeda kala duwan. Font ku habboon dhacdooyinka isboorti iyo ciidaha.
Si aad u soo dejiso - Ciyaar kubbadda kubbadda
Waxaan ku laabaneynaa ilo aad u isticmaali kartid oo keliya adeegsi shaqsiyeed. Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan qaab-dhismeedkan ayaa ah sidii in lagu rinjiray qalin qalin midab leh, kaas oo siinaya qaab aad u gaar ah iyo taas waxay ku habboonaan kartaa xuruufta alaabta cuntada.
Si aad u soo dejiso - Nooca Candy Inc.
Sidoo kale adeegsiga shakhsi ahaaneed, Jackport waa font kuu oggolaanaysa inaad isticmaasho luqado kala duwan. Waa kuwan xariiqyada toosan iyo xaglaha adag ee loogu talagalay xarrago xarrago leh oo miyir leh oo kufiicnaan kara ujeedooyin kala duwan.
Si aad u soo dejiso - Qoraalka Jackport
Bosox dib loo eegay
Font gabi ahaanba bilaash ah ku nuuxnuuxso qaabkaas sidii loo gooyay iyo inay ku kala duwan yihiin dhinacyada geeska qaab-dhismeedka qoraalka. Waxaad kuheli kartaa culeysyo iyo qaabab kaladuwan oo kujira fartaan la yiraahdo Bosox.
Si aad u soo dejiso - Font Bosox
Ilo shaki la'aan aad u gaar ah Waxaana ku dhiirrigelinaya guridda iyo astaamaha baseball-ka. Foomkani wuxuu leeyahay 2 nooc: Broffont Script & Broffont Script Swash. Uma isticmaali kartid adeeg ganacsi, laakiin adeegsi shakhsiyeed. Sida kuwa kale oo badan dhowr euro waxaad u isticmaali kartaa inaad wax kaga beddesho boggaaga.
Degso - Xigasho Broffont
Ilo kale oo loo isticmaalo shakhsi ahaaneed iyo taas Waxay ku dhowdahay inay dhiirrigeliso reer galbeedka. Waxaan ku dhahnaa khadadkiisa toosan iyo xarfaha xiisaha leh. Nooc qoraal ah oo u adeegsanaya hooska buuxinta mid kasta oo ka mid ah xarfaha taas oo siinaysa taabashadaas gaarka ah.
Si aad u soo dejiso - Xariijinta Khadka Tooska ah
Kuwaas dhididka Mareykanka leh waraaqahaas kuleejka ah? Hagaag, font-kaani wuxuu kafiican yahay awood u lahaanshaha abuurka farta gaarka ah iyo nooca Mareykanka. Waxaan ku dhownahay inaan tagno rugby ka badan baseball, si loo siiyo noocyo kala duwan maadada "Iftiinka Habeenkii Jimcaha" waa ilo aad loogu taliyay. Kaliya u isticmaal shaqsiyeed.
Degso - Xigasho Friday Night Lights
Font lagu tilmaamo xariiqdaas oo dhammaad ku dhow sida waa astaanta nike taasina waxay siinaysaa taabasho gaar ah. Font baseball oo waliba siiya noocyada kala duwan ee xarfaha ku qoran liiskan. Waxaad ku haysataa gebi ahaanba bilaash si aad ugu raaxaysato, markaa waxay durba qaadanaysaa waqti in lagu daro Photoshop oo la rakibo.
Si aad u soo dejiso - Qoraalka Ruuxa Kooxda
Cherry iyo dhunkasho
Aad bay u cadahay by halka xabbaduhu la socdaan xarfaha baseball-ka, laakiin waxay yeelan kartaa adeegsiyo badan. Xaglo furan qaabka iyo qaabka loo yaqaan 'calligraphic'. Uma isticmaali kartid ganacsi ahaan, laakiin adeegsi shakhsiyeed. Haddii aad u baahato inaad ku isticmaasho wax soo saar kasta, waxaad ka iibsan kartaa shabakadda.
Si aad u soo dejiso - Cherry iyo dhunkashada font
Qeybta Vintage College
Ilo kale oo aad u jaamacadeed iyo in sida mid ka mid ah kor ku xusan waad u adeegsankartaa funaanadahaas Mareykanka ee baaxad weyn ku leh qaab qoraalka. Waxaa loo heli karaa adeegsi shakhsi ah oo keliya. Moodhad yar oo kubbadda baseball ah oo gelitaankan u siinaya magaceeda si dhammaystiran, miyaadan u malayn?
Si aad u soo dejiso - Kulliyadda Waaxda Kulliyadda
Fagaaraha Hokjesgeest ayaa cirka isku shareeray
Mid ka mid ah kuwa dhif ah ee aad ku arki doonto liistadan, laakiin taasi si toos ah ayaa loogu geli karaa ilaha baseball. Midkani waa mid ganacsi iyo mid shaqsi ahaanba loo adeegsado. Font leh xariiqyo badan oo toosan iyo 90 darajo xaglo. Way cadahay sida gaarka ah ee ay u tahay khadadkaas ka baxa joomatari caadi ah si ay u siiso qaab u gaar ah oo aan shaki ku jirin.
Si aad u soo dejiso - Hokjesgeest font
Font aad u yaab badan ku dhowaad inaad dib noogu celiso sannado kale taasna waxaa lagu gartaa inay ahaato mid khaas u ah sababaheeda oo dhan. Wicitaan muuqaal leh, waxay leedahay faahfaahintiisa oo leh xariiqyo toosan oo aad u caan ah oo aan cidna uga tagaynin danayn la'aan. Sifiican ayaa loo istcimaalay waxay ku ridi kartaa walxaha ku jira keega in shaqadaadu u noqon karto macmiil la siiyay.
Degso - Xigasho Buffalo Nickel
Kooxda Jersey 97
Ilo kale oo ka badan jaamacad ku caan baxday soo bixitaannadaas badhtanka naqshadda mid kasta oo ka mid ah xarfaha. A slab varsity slab iyo in nooca buuxa uu leeyahay astaamaha yurubiyanka gaarka ah sida lahjadda. Waad fahmi kartaan inaad u adeegsan kartaan adeegsi shaqsiyeed.
Degso - Xigasho Kooxda Jersey 97
Guridda ugu Fiican N8
Font kale oo xarriiqyo toosan iyo taas ficil ahaan waa jaamacad. Waxay u taagan tahay habkaas oo u muuqda mid jajaban oo jajaban taas oo siineysa dhibic gaar ah oo lagu kala soocayo liistada inteeda kale noocyada noocyada baseball-ka. Waxaad u mari doontaa sanduuqa haddii aad rabto inaad u adeegsato ujeedo ganacsi. Dabcan, waxaad u haysataa adeegsi shaqsiyeed oo ku samee waxa aad rabto.
Si aad u soo dejiso - Guridda ugu fiican N8 Font
NCAA Purdue Kuleyliyaha sameeya
Font a dabeecad leh oo si qumman loo arki karo gaabinta loogu talagalay NCAA sida uu hadalka u dhigay. Waxay ku jirtaa xarfaha yaryar halkaas oo aad ka heli karto jaantusyadaas si aad ula jaanqaado waxa noqon doona dhinacyada ugu qalooca nooca qoraalka. Waxaa loo heli karaa adeegsi shakhsi ah oo keliya.
Si aad u soo dejiso - Xigasho NCAA Purdue Boilermakers
Xigashadani waa kuwa ugu casrisan liiska, in kasta oo aanu joojinayn soo rogaya taataabashada waxoogaa yar oo retro ah. Xarfaha guud ee caasimada oo lagu garto dhiira gelinta maaliyadaha kooxaha kubbadda cagta Mareykanka iyo dharka yunifoomka. Font nooc ka duwan oo si fiican ugu habboon liistada noocyada nooca baseball-ka ah. Ah, waxaad u haysaa ganacsi ahaan iyo adeegsi ahaanba.
Degso - Xigasho Kubadaha Ciyaaraha
Kooxda Jersey 95
Font-kani wuxuu la mid yahay kii hore oo adigaa helaya ganacsi ahaan iyo adeegsi ahaanba. Waxay sidoo kale raacaysaa xeerarkii kii hore ee ay dhiirrigelisay maaliyadahaas dabeecadda leh ee Mareykanku leeyahay. Font ku xiran wax ka beddelid iyo ujeeddooyin kala duwan.
Si aad u soo dejiso - Kooxda Jersey 95 font
Hadana haddaynu ka hadlayno tiro badan oo noocyo baseball ah, sidee bay taasi noqon kartaa maya qaado baseball wuxuu yahay? Kaliya Baseball waa warqad la waxyoodo taasna waxay noo ogolaaneysaa adeegsi shaqsiyeed inaan si toos ah u tusno baseball. Ma jiro wax kale oo lamid ah, ma waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo qaybta ganacsiga?
Si aad u soo dejiso - Farta baseball
Iyo sida aan ugu jirno adduunyada isboortiga, alphasports ururi noocyo badan oo iyaga ka mid ah oo aan baseball-ka ka maqnayn. Waad u adeegsan kartaa adeeg ganacsi iyo mid shaqsi ahaanba. Marka haddii aad raadineyso il ka mid ah tartamada xagaaga ama horyaalka kubbadda cagta ee xaafadda, tani waa mid ku habboon kulamadaas.
Si aad u soo dejiso - Xarfaha Alphasports
Farta Baseball Macromedia
Waa a laga helo ilaha asalka ah ee liiska oo dhan asal ahaanna waa animation labo ciyaaryahan oo diyaar u ah inay kubbada tuuraan oo ay mid soo ururiyaan. Waa tan ka reebban ee buuxineysa sharciga dhammaan ilahaas aan idinla wadaagnay oo aan rajeyneyno inay buuxiso shuruudaha laga filayo. Ma sameysmi doono wax ereyo ah, laakiin waxay siisaa ciyaar badan, sidaa darteed hubaal waad ogaan doontaa sida looga faa'iideysto fartaan la yiraahdo Baseball.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Noocyada baseball-ka
Waxaan ubaahanahay qeybta ka hooseysa xarafka, laakiin marcelle wax faa iido ah malahan maxaa yeelay waxay leedahay godad, ballpark wuu fiicanyahay laakiin ma keeno "swhashes", fikrad kasta sida loo helo font sida marcelle laakiin aan lahayn godad?
Ku jawaab kreador
Aad baad ugu mahadsantahay ilahaas!
Adigu waad guuleysatay!
sii wad !!!
Ku jawaab hugol
Iga raali noqo, sidee baan ugu rakibi karaa sawir-qaade ama sawir-qaade ???
Ku jawaab leslie
ilaha macluumaadka baseball
xarfaha wanaagsan, waxaan kaliya ubaahanahay inaan dhigo jeedal xarafka ugu dambeeya oo leh farta loo yaqaan 'brannboll' maxaa yeelay ma soo baxdo, mahadsanid
Ku jawaab javier nemecio hernandez diaz